ယနေ့အချိန်အထိ H1N1 ရောဂါ ခံစားနေသူ နှင့် သေဆုံးသူ ဘယ်နှစ်ဦး ရှိပြီလဲ ….. ??? - Myanmarload
ယနေ့အချိန်အထိ H1N1 ရောဂါ ခံစားနေသူ နှင့် သေဆုံးသူ ဘယ်နှစ်ဦး ရှိပြီလဲ ….. ???
လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် က 10:25 August 07, 2017
ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့အထိ ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေသူ စုစုပေါင်း လူနာ ၃၈၇ ဦးအနက် H1N1 ပိုးတွေ့သော လူနာ စုစုပေါင်း ၁၄၆ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၁၅ ဦး ရှိပြီး ထပ်မံ တိုးလာခြင်း မရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
သြဂုတ်လ ၅ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီအထိ သံသယရှိလူနာ ၃၁ ဦးအား ဓာတ်ခွဲ စမ်းသပ််စစ်ဆေးခဲ့ရာ H1N1 ပိုးတွေ့လူနာ ၁၀ ဦး တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
ဇူလိုင် ၂၁ရက်မှ သြဂုတ်လ ၆ရက်နေ့အထိ ပြင်းထန်သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောဂါဖြင့် လတ်လလော ဆေးရုံတက်ကုသသူ လူနာပေါင်း ၃၈၇ သီးအနက် H1N1 ရောဂါပိုးတွေ့သူ လူနာ စုစုပေါင်း ၁၄၆ ဦး ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၁၅ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကုဆေးရုံကြီး (ဝေဘာဂီ)တွင် H1N1 ပိုးတွေ့သော လူနာ ၂၅ ဦးနှင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ဆေးရုံများတွင် H1N1 ပိုးတွေ့လူနာ အတွင်းလူနာ ၃၉ သီး၊ စုုစုပေါင်း ၆၄ ဦးအား ဆက်လက်ဆေးဝါးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ အများစုမှာ သက်သာလျက်ရှိပြီး မကြာခင် ဆေးရုံဆင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အများဆုံးဖြစ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် တုံပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် အသိပညာပေး လုပ်ငန်းများကို အထူးဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။
လတ်တလော ပြင်းထန်သော အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၃၈၇ ဦးတွင် အသက်အပိုင်းအခြားအရ အသက် ၅နှစ်အောက်တွင် ဖြစ်ပွားသူ ၈၇ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၂ ဦး၊ အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၂ နှစ် ကြားတွင် ဖြစ်ပွားသူ ၂၆ ဦး ၊ သေဆုံးသူ ၂ ဦး၊ အသက် ၁၃နှစ်မှ ၆၅ နှစ်ကြားတွင် ဖြစ်ပွား ၂၄၈ ဦး၊ သေဆုံးသူ ၁၁ ဦးရှိပြီး အသက် ၆၅ နှစ် အထက်တွင် ဖြစ်ပွားသူ ၂၆ ဦး၊ သေဆုံးသူ မရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လတ်တလော အခြေအနေတွင် ပြင်းထန် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသသူများတွင် သေဆုံးမှုမှာ ၃ ဒဿမ ၉ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် H1N1 ရောဂါပိုး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများကြောင့် သေဆုံးရခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အခြားရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူ ၁၃ ဦး ရှိကြောင်းကိုလည်း သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါအား ဂျပန်နိုင်ငံ National Institute of Infectious Disease ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပို့ဆောင်၍ အသေးစိတ် စစ်ဆေးခဲရာ ထိုရောဂါပိုးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပုံမှန်ပျံ့နှံ့နေသည့် ရာသီတုပ်ကွေးအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း သိရှိရပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါကို ကုသသည့် ဆေးများအား ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိ တုံ့ပြန်မှုရှိပြီး ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါပိုးနှင့် မျိုးရိုးဗီဇ ပေါင်းစပ်မှု မရှိကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။
Page generated in 0.2830 seconds with5database query and6memcached query.